Author: Shakazil Yorisar
Guddidu waxay caddayntooda u gudbinayaan xafiiska codsiga caddayntu uga yimid cuwub Maxamadda Dastuurka wixii iyaga uga muuqda. Ma bannaana in laga qaado xubinta Golaha Wakiilada tallaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo oggolaansho looga helo Golaha Wakiilada mooyaane.
Dawladda ayaa muwaadiniinta u dammaanad qaadaysa xuquuqda iyo xorriyadaha. Qodobka 66aad-Awoodaha Xukuumada Federaalka ee Taageera Nidaamka Federaalka 1 Haddii xukuumad dowlad-goboleed ay gudan kari waydo xilkeeda ama ay ku kacdo maamul xumo maaliyadeed, masuuliyada koowaad ee xukuumada federaalku waa in ku taageerto xukuumada dowlad-goboleedda sidii ay wax uga qaban laheyd xad-gudubyadaas, ayna qaado talaabo kasta oo lagama maar maan ah oo dowlad-goboleedda u suurto galinaya in ay xilkeeda u gudato si wax ku ool ah.
Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada. Qodobka 58aad-Wada-xaajoodyada Dawliga ah 1 Iyadoo dareen iskaashi lagu shaqeynayo, waa in dawladda federalka ahi ay dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga ama arrimaha kale ee muhiimka ah ee heshiisyada dawliga ah ku saabsan.
Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida. Shareecadda lslaamku ma oggola in qofka Muslinka ah ka noqdo caqiidadiisa. Xubinimada Golaha Wakuda waxa la waayi karaa haddii: Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale. Ka shaqeysunta carruurtahaweenka, shaqeynta saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada, fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxaa qeexaya Xeerka Shaqada.
Khiyaamo Qaran High Treason ama.
Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada. Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin kasta dstuurka ay dawladaha hoose ku wareejinayso xilalka.
Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha dastuuroa ah Dowladda Federaalka.
Fadhiyada Golaha Wakiiladu waa kuwo furan, kuwo xidhana way noqon karaan; xeer hoosaad baana nidaaminaya. Xarunta Golaha Wakiiladu waa Magaalo-madaxda.
Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ccusub leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Waxa reebban in qofka lagu xidho meel aanu xeerku bannayn. Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka.
Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Golaha cusub waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horreeya 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta Iagu dhawaaqo go’aamada doorashada; adstuurka isugu yeedhaya Dusub Jamhuuriydda. Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole cusub.
Gudidda Cadaaladdu waa hay’adda hoggaamisa maamulka Garsoorka, waxayna ka kooban tahay: Xukuumaddu waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Habka Buuxinta Jagada Bannaanaatay. Golaha Guurtidu waxa uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha. Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cisub ee Soomaaliya.
Waa goob lagu fidiyo Diinta iyo hanuuninta ummadda dun iyo adduunyaba. Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn.
Muwaadiniintu waxay xor u yihiin in ay isu habeeyaan ururro siyaasadeed, cilmiyeed, dhaqameed, bulsheed, xirfadeed, ama kuwa shaqaale si waafaqsan xeerka. Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyaadka qofka.
More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Tilmaanta Guud ee Golaha Guurtida. Taliyayaasha dastuurak iyo Ku-xigeenadooda; r. Hawlaha waxaa loogu wareejinayaa goleyaasha dowladaha hoose si tartiib- tartiib ah oo la socota hadba koritaanka kartidooda.